လှကျော်ဇော ● မြောက်ကိုရီးယားအရေး စစ်အေးခေတ်ကြီး ပြီးတော့မလား – MoeMaKa Burmese News & Media
July 2, 2018 Aung Htet
၁၉၇၂ ဖေဖော်ဝါရီ (၂၁) ပီကင်းနိုင်ငံတကာလေဆိပ်မှာ အမေရိကန်သမတ ရစ်ချတ်နစ်ဆင်နဲ့ တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် ချိုအင်လိုင် တို့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံ ကမ္ဘာကိုပြန့်သွားတော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ်မှာ အပြောင်းအလဲကြီး တွေ ချက်ချင်းပပေါ်လာတော့မလို ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ ကမ္ဘာ့အင်အားချိန်ခွင်လွှာ အပြောင်းအလဲရဲ့ အစပြုချက်ကလေးပဲဖြစ်တာပါ။ နစ်ဆင်ရဲ့တရုတ်ပြည်ခရီးစဉ်ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဟာ နှစ်ရှည်လများကြာမှ ပေါ်ထွက်လာတာပါ။ ဥပမာ …
၁။ တရုတ် – အမေရိကန် သံတမန်ဆက်ဆံရေးကို ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှ ထူထောင်နိုင်ပါတယ်။
သူတို့နှစ်ဦးလက်မှတ်ထိုးထုတ်လိုက်တဲ့သဘောတူညီချက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့ သဘောထားအမြင်တွေ အမျိုးမျိုး ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ အဆိုးအကောင်း အစွန်းနှစ်ဖက်အမြင်များအပါ သတိနဲ့ အကောင်းမြင်ကြတာကတော့ များပါတယ်။ သဘောတူညီချက်များထဲမှာ အဓိကနှစ်ချက်ကတော့ မြောက်ကိုးရီးယားက လုံးဝအနုမြူဖျက်သိမ်းရေးကို လက်ခံလိုက်ရပြီး အမေရိကန်ကတော့ မြောက်ကိုရီးယားလုံခြုံရေးကိုအာမခံတဲ့အနေနဲ့ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတွဲလုပ်ဆောင်နေတဲ့ စစ်လေ့ ကျင့်ခန်းတွေကို ရပ်ပေးလိုက်ရတာပါပဲ။ ဘက်နှစ်ဖက်စလုံးက အပေးအယူလုပ်လိုက်ရတာပါ။ အဆင့်အကန့်အသတ်၊ အ ချိန်အကန့်အသတ် စတဲ့အသေးစိတ်ခြေလှမ်းတွေမပါလို့ အဆိုးမြင်သူများရဲ့ထောက်ကွက်တွေရှိနေပေမယ့် အဲဒီအဆင့်တွေ ကို အကောင်အထည်ဖော်မည့် ယန္တရားတွေ အဆင်သင့်ပါဝင်လာတာတွေ့လာရပါတယ်။ (ဥပမာ – မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ တောင်ကိုရီးယားအကြား စစ်တပ်နှစ်တပ်ဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ အားကစားအဖွဲ့များ အတူယှဉ်ပြိုင်ရေးဆွေးနွေးပွဲ၊ ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့များရဲ့ ကွဲကွာသွားတဲ့မိသားစုများပြန်တွေ့ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ ဆက်တိုက်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။)
တကယ်တော့ ဒီလိုမျိုးသဘောတူညီချက်တွေကို အခုမှရတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မြောက်ကိုရီးယားအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်ကစပြီး ၂ဝဝ၉ အထိ အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ခြောက်နိုင်ငံ (တောင်မြောက်ကိုရီးယား၊ တရုတ်၊ အမေရိကန်၊ ရုရှား၊ ဂျပန်) အစည်းအဝေးများမှာ သဘောတူညီချက်အမျိုးမျိုး ရခဲ့ဖူးပါတယ်။ အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ နောက်ဆုတ်သွားမှု တွေရှိခဲ့လို့ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်လည်း တချို့က အဆိုးမြင်နေကြတာပါ။ ဒါဖြင့် ဒီတချီရတဲ့သဘောတူညီ ချက်များကရော ဘာထူးသလဲ။ ထူးခြားမှုကတော့ ….
၁။ အမေရိကန်ပြည်သူများအနေနဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မိမိတို့နိုင်ငံက ပုလိပ်ကြီးလိုနေရာတကာပါဝင်ပြီး ငွေရေးကြေးရေးသာမကလူတွေပါဝင်အသေခံလုပ်နေရတာကို မကျေမနပ်ဖြစ်လာပြီး၊ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်သာ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်လာစေလိုလာပါတယ်။ ဒီလိုမလုပ်ရင် ကမ္ဘာဇာတ်ခုံပေါ်က တွန်းအချခံရတော့မှာပါ။ ဒီအချိန်မှာ အမေရိကန်သာပထမဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံတင်လာတဲ့ ဒေါ်နယ်လ်ထရန့် သမ္မတဖြစ်လာပါတယ်။ ရမ်းရမ်းကားကားတွေပြောလုပ်လာတဲ့ သမ္မတထရန့်ဟာ နိုင်ငံရေးမှာ အထီးကျန်လာပါတယ်။ သမရိုးကျမဟာမိတ်များ (ဥပမာ – ဥရောပနိုင်ငံများ) နဲ့တောင် အကွဲအပြဲတွေဖြစ်လာပြီး လူထု ထောက်ခံမှုပါကျလာလို့ သံခင်းတမန်ခင်းအောင်ပွဲခပ်ကြီးကြီး (ခဏတာပဲဖြစ်ဖြစ်) လိုအပ်လာတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်လာနေတာ ပါ။ ဒါ့အပြင် ထရန့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း မြောက်ကိုရီးယားကို တရုတ်တို့ ရုရှားတို့ရင်ခွင်ထဲကဆွဲထုတ်ပြီး တောင်ကိုရီး ယားနဲ့တွဲရက် အမေရ်ိကန်ရဲ့လုံခြုံရေးကွန်ရက်ထဲဆွဲသွင်းပြီး ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်တခုလုံးအပေါ် အင်အားအသာစီးရလာ ရေးကိုပါ။ နိုင်ငံငယ်တွေရဲ့အရေးကိစ္စတွေကို နိုင်ငံကြီးတွေက အမျိုးမျိုးဖိအားပေး (sanction အပါ) တာကို အစဉ်အလာ အဖြစ် ခံကြမလား။ ဒါကလည်း စဉ်းစားစရာ ပြဿနာတရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေရှာရေးဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံများတင်ပြီး သူ့နိုင်ငံမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ တံခါးဖွင့်ပေါ်လစီကျင့်သုံးလာရာမှာ အနှစ် (၄ဝ) (၁၉၇၈ – ၂ဝ၁၈) ကြာပြီးနောက်၊ အခုအခါ ကမ္ဘာမှာ စီးပွားရေးအရ ဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒါ့အပြင် စစ်ရေးအရလည်း ဘက်စုံက (အထူးသဖြင့် ရေတပ်) အင်အားတောင့်တင်းလာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နိုင်ငံရေးအရသံခင်းတမန်ခင်းအရ လက်ဦးမှုရယူပြီး ရှေ့တန်းကို တ ဖြည်းဖြည်းတိုးလာနေပါတယ်။ သဘောက တရုတ်အနေနဲ့ ဒေသဆိုင်ရာအင်အားကြီးနိုင်ငံတရပ်အဖြစ်ကနေ ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်သို့ တက်လှမ်းလာတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို မြင်တွေ့လာရပါတယ်။ ကမ္ဘာစီးပွားရေးအကြပ်အတည်းက လွတ် ရာလွတ်ကြောင်းနည်းလမ်းများကို ရှာလာရာမှာ လူကြိုက်နည်းလာနေတဲ့ (အရင်းရှင်) ဂလိုဘယ်လာဇေးရှင်းကို ဆို ရှယ်လစ်ဂလိုဘယ်လာဇေးရှင်း (ကံကြမ္မာများကိုမျှဝေထားတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းထူထောင်ရေး Community of shared destiny) နဲ့အစားထိုးရေးအတွက် သေနင်္ဂဗျူဟာခြေလှမ်းကြီးဖြစ်တဲ့ ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမစီမံကိန်း (One Belt One Road—OBOR) ကို တင်ပြလုပ်ဆောင်လာနေပါတယ်။
← ကာတွန်း ATH ရဲ့ မြန်မြန်ဖြုတ်ပါဟ ….
မျိုးတေဇာမောင် ● စစ်ကြီးပြီးဆုံးတဲ့နေ့က →
February 19, 2015 February 19, 2015 Aung Htet
June 9, 2017 Aung Htet